China Retail ụlọ ahịa n'ihu akara emepụta na suppliers |Zhengcheng
Ọnụọgụ ndị ọrụ:>50
Aha ngwaahịa: Mpempe akwụkwọ ọkụ ọkụ n'ihu ụlọ ahịa dị n'èzí
Agba : ahaziri
Ngwa: Ụlọ ahịa dị mma, ụlọ ahịa kọfị, ụlọ ahịa achicha, nnukwu ụlọ ahịa
Uru nke ụlọ ahịa azụmaahịa Zhengcheng n'ihu akara
1.Welata ọnụ ahịa nke iji akara (nhazi patent na-echekwa ike / mbelata ụgwọ ọrụ mmezi / ndụ ọrụ ogologo).
2.Our ngwaahịa dị mfe iji wụnye na ịmụta a na-echegbu onwe-free, disassembly-free mmezi Ọdịdị imewe, na-eme ka mmezi mfe.
3.The curved panel imewe n'ụzọ zuru ezu na-ewusi bughi nkwụsi ike na deformation iguzogide nke ìhè igbe.
4.V-shaped 45-degree light emitting led light patented product, nke mere na ike ọkụ nwere ike iji rụọ ọrụ nke ọma.
5.Modular mmepụta na ịzụ ahịa na-eme ka ọ dị ngwa iji wuo ụlọ ahịa.
6.More a ma ama na agba na udidi, ọzọ atọ akụkụ ahụ ahụmahụ.
7.The kenha pụrụ iche kanopi bụ nkecha na mara mma, mgbe na-echebe signboard si stains.
Imepụta oghere ọkụ dị elu na-achọpụta ihe ngosipụta nke abụọ nke ike ọkụ ma na-ebuli ojiji nke isi mmalite ọkụ.E jiri ya tụnyere igbe ọkụ ọdịnala, igbe ọkụ na-echekwa ike nke Zhengcheng nwere ike ịchekwa 65% nke ọkụ eletrik.
Nchapụta nke tube ọkụ ejiri na igbe ọkụ Zhengcheng na-azọpụta ike bụ okpukpu 2.3 karịa nke tube ọkụ ọdịnala.
Ụkpụrụ nhọrọ ihe siri ike na nhazi usoro ihe eji arụ ọrụ nweta mmesi obi ike nke afọ iri
Nhazi nhazi nke ọma:
Ngbanwe tube ọkụ nke igbe ọkụ na-echekwa ike nke Zhengcheng dị nnọọ mfe ma dịkwa mma.Ọ na-ewe naanị nkeji 5 na nzọụkwụ anọ iji dochie oriọna.Ọ dịghị achọ ihe enyemaka ọ bụla ma ọ bụ ịkwasa igbe ọkụ, nke na-ebelata ihe isi ike nke mmezi.
Nke gara aga: Ihe nrịbama dị n'èzí Led maka ụlọ ahịa dị mma wowo
Osote: Ahịa akara ihu maka ụlọ ahịa dị mma KH24H
Igbe nrịbama nke mpụga, Ihe nrịbama ụlọ ahịa, Akara ngosi, Ihe nrịbama ụlọ ahịa ọgwụ, Igbe nrịbama nke ọnya ọkụ, Vacuum Forming Light Igbe nbanye,